Neymar Jr oo si adag ugu jawaabay Haaland kaddib guushii ay PSG xalay ka gaartay Dortmund ee Champions League – Gool FM
(Paris) 12 Mar 2020. Neymar Jr ayaa si adag ugu jawaabay Haaland kaddib guushii kooxdiisa ay xalay ka gaartay Dortmund ee Champions League, waxaana uu u sheegay in Paris ay tahay caasimadooda ee aysan ahayn caasimadda Haaland.
Kaddib markii Neymar uu ka caawiyey PSG inay ka gudbaan wareegga 16-ka Champions League markii ay xalay garaaceen Dortmund, weeraryahankan reer Brazil ayaa sawir soo dhigay bartiisa instagram-ka, waxaana uu ku soo qoray: “Paris waa caasimaddeenna, ma’ahan taada”.
Erling Haaland ayaa kulanka ka hor waxa uu bartiisa snapchat-ka soo geliyey Hotel Paris waxaana uu soo raaciyey qoraal u dhignaa: “Caasimadeyda ma’ahan taada.”
Markii uu Neymar dhaliyey goolka koowaad ee ciyaartay kulankii xalay PSG ay guusha 2-0 ka gaartay Dortmund, waxa uu soo min-guuriyey dabaal-deggii uu Haaland sameeyey markii uu gool ka dhaliyey kulankii lugta hore ee ka dhacay Jarmalka.
Kulanka markii uu soo dhammaaday kaddibna waxa uu Instagram-kiisa soo dhigay sawir uu soo raaciyey qoraal u dhignaa: “Caasimaddaadu waa Norway ee walaal dib ugu laabo. Paris waa caasimaddeenna ee ma’ahan taada.”